China Aluminium chiwanikwa chemagetsi michina accessories Mugadziri uye mutengesi | DOWODA
Mirror yakabwinyiswa vhoriyamu yakasarudzika yakajeka PVD au ...
Auto zvikamu jira simbi ruoko ndiro kugadzira pepa M ...
cnc CNC lathe kugadzirisa isiri-standard simbi processi ...
Yakakura CNC yekugadzirisa tsika komputa gong kugadzira ...
CNC aruminiyamu chiwanikwa kugadzira ruoko proofing precisio ...
Sheet simbi zvishongedzo
Dhijitari Kamera Kesi
Aluminium chiwanikwa chemagetsi michina accessories
chigadzirwa zita Aluminium chiwanikwa chemagetsi zvishongedzo chigadzirwa mhando Dhijitari chikamu
Maitiro ekugadzirisa Kugadziriswa kwetsika Processing mhando CNC hwokugaya hwakabvira Machine
Zviratidzo zvekutenderera 3-7 mazuva Nemazvo kupedza
Kutenderera kutenderera Mazuva gumi nemashanu The kunonyanyisa dhayamita 500mm
Surface hukasha 0.2 Iyo yakanyanya kureba 1500mm
Surface kurapwa Kuchengetedza Chigadzirwa shiviriro 0.01mm
Kugadzira zvinhu aruminiyamu
Chigadzirwa Kushandisa Dhijitari kamera zvishongedzo
Dambudziko rekugadzirisa cnc kufamba muchina:
Iyo yekuongorora maitiro emagetsi zvikanganiso zvakare maitiro ekugadzirisa. Naizvozvo, dzimwe nzira dzakajairika dzekugadzirisa matambudziko emagetsi dzakaunzwa zvakazara munzira dzekuongorora dziri pamusoro. Zvino, akati wandei zvakajairika magetsi zvikanganiso zvakanyorwa.
1. Simba rekupa Simba simba ndiro sosi yesimba kune yakajairika mashandiro eiyo system yekuchengetedza uye iyo yese CNC yekufamba muchina. Kana ikakundikana kana kukanganisa kuri kudiki, icharasa dhata uye kukonzeresa kudzima. Muzviitiko zvakakomba, zvinogona kuparadza chikamu kana zvese zvehurongwa.
Nyika dzekuMadokero dzine simba rakaringana uye nemhando yepamusoro yegridhi, saka yavo yemagetsi system dhizaini yekufungisisa ishoma. Izvi zvishoma zvinokwana kumagetsi emagetsi ekushambadzira pamwe nekuchinja kukuru uye mahonthoni akakwirira muChina. Zviitiko, hazvidzivirike kuti pachave nekukundikana kunokonzerwa nemagetsi. Tinofanira kuedza nepatinogona napo kugadzira iyo sisitimu yekugovera magetsi yeCCC musimboti wekufamba muchina:
Ipa rakazvimiririra rekugovera bhokisi pasina kushandisa akateedzana nemimwe michina;
Is Pane ivhu rakanaka pakutanga kwemagetsi;
As Nzvimbo dzine mashoma emagetsi emagetsi dzinofanirwa kuve nematanho matatu-emagetsi emagetsi ekudzikamisa.
④ Marongero emagetsi emagetsi mukabati uye nekuisa waya dze AC neDC zvinofanirwa kusarudzika kubva kune mumwe nemumwe.
⑤ Iwo matatu-chikamu magetsi anopa anopinda muCNC musimboti wekufamba muchina anofanirwa kutora matatu-chikamu shanu-tambo sisitimu, uye kwazvakarerekera (N) uye pasi (PE) zvakanyatsopatsanurwa;
2.) Nzvimbo yakaturika yeiyo CNC yekufamba sisitimu inokanganisa
OsitionPosition chiuno aramu. Zvingave izvo kuti chiyero cheyero chiyero chakavhurika; chinhu chekuyera chakakuvara; iyo chiratidzo chiratidzo chinogadzikiswa nechinzvimbo kudzora hachipo.
② Nhengo yekubatanidza inofamba pasina murairo. Kungave kuti kukweva kwakanyanya; iyo chiuno chiuno kana yekumhanyisa chiuno chakabatana kune yakanaka mhinduro; wiring yemhinduro yakavhurika; chinhu chekuyera Zvimedu zvakakuvara.
3. Iyo zero poindi yeiyo CNC yekufamba muchina wekushongedza haigone kuwanikwa. Zvinogona kunge kuti zero nzira iri kure kure nezero poindi; iyo encoder yakanganisika kana iyo wiring yakavhurika; iyo yakakwenya zero poindi mucherechedzo washandiswa;
Speed ​​switch yakundikana.
4. Hunhu hwakasimba hweNC musimboti muchina unowedzera, mhando yeiyo workpiece yakadzikiswa, uye musimboti muchina unodedera nguva dzose. Pane zvakawanda zveizvi-mhando zvinogona kunge zviri
Mukaha weiyo michina yekufambisa hutachiona hwakanyanya kwazvo kana kutopfeka, kana njanji yegwara haina kunyoroveswa zvakakwana kana kusakara; inogona kunge iri yekumhanyisa loop yeiyo yemagetsi control system
Iyo chinzvimbo chiuno uye zvinoenderana parameter hazvisisiri mune yakanyanya inoenderana mamiriro, uye inofanirwa kukwidziridzwa zvakare mushure mechimisheni kukanganisa kwakanyatso kubviswa.
5. Kundikana kudzima kutadza. Pane mamiriro maviri anogona kuitika pano: -Mumwe mamiriro ndeyekuti dambudziko mune inoenderana software
Iko kutadza kwekudzima pasi pemubatanidzwa wekushanda uye kushanda mashandiro kunowanzo nyangarika mushure meCNC yemuchina muchina wabviswa simba mushure mekudzimwa kwesimba; imwe mamiriro inokonzerwa nemamiriro ezvinhu ezvakatipoteredza
Muchina wepfungwa unoiswa mune yakajairika fekitori chivakwa kana kunyangwe padyo neyakavhurika hombe "], uye kabati remagetsi rakavhurika kwenguva yakareba, uye kune zvakawanda zvekushandisa zvakaita seguruva rinogadzira, shavheni yesimbi, kana mhute yemvura padyo.
Mira. Izvi zvinhu hazvingokonzere kutadza chete, asi zvakare zvinokanganisa zvakanyanya masisitimu emufambo-kuburikidza nemuchina. Ive neshuwa yekuteerera kuvandudza.
Pashure: Aluminium chiwanikwa kutaurirana michina
Zvadaro: Sheet simbi zvishongedzo
Cnc Tsika Kugadziriswa
Cnc Zvikamu Kugadzirisa Kugadzirisa
Cnc Mashoma Batch Kugadzirwa
Cnc Yakakosha-Yakaumbwa Machining
Yakakura Cnc machine
Sheet simbi chassis goko
CNC kumumvuri womuenzaniso kugadzira kutsanya proofing ha ...
Asina-akajairwa aruminiyamu zvikamu
CNC aruminiyamu chiwanikwa kugadzira ruoko proofing pre ...
Dongguan Dongwangda Precision Technology Co, Ltd.
5 Sekaiichi CNC Lathe, Cnc Stainless Simbi Kugadzira, Cnc Precision Zvikamu Kugadziriswa, Cnc Ruoko Bhodhi Kugadziriswa, Cnc Machining Center Kugadziriswa, Machina Zvishandiso Shell,